musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeChishanu yeBhola inonyanya kuzivikanwa neNickname; "Magidhi Mashoma". Our Hector Bellerin Childhood Story pamwe neBiography Fact inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva ino. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hukama hwehukama, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF-Enda zvishoma zvisinganyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvekugona kwake nokukurumidza asi vashomanana vanofunga nezveHitori Bellerin's Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Héctor Bellerín Moruno akaberekwa musi we 19th waMarch 1995 muBarcelona, ​​Spain. Iye ndiye Pisces yakasimba kuburikidza nekuberekwa. Hector akaberekerwa Mr naMate Maty Moruno vose, veSpanish uye vagari veCatalonia.
Héctor akatanga mazuva ake okukwikwidza muBrazil Youth System kubva pamazera ekutanga kwe6. Akapedza makore e-8 achidzidza bhosi yeBhola Barcelona mukurwisana uye kwete kurudyi-mapiro.
Kunyangwe achiri mwana, Héctor akaratidzira mheni yake uye kurwiswa kwemaitiro panguva yake muBarcelona. Pane dzimwe nguva, akavhota 'Munhu wemutambo' mumatambo. Kuzivikanwa kwake kwakasimuka pa 2008 Canillas mumakwikwi emarudzi ose muMadrid apo akapiwa murume wekukwikwidza kwakakonzerwa naZinedine Zidane.
Vose veFc Barcelona fan vaida Bellerín. Vakagamuchira mufaro mukumuona achishandisa nhanho dzake mukutora vashori vadziviriri uyewo kuenda nokukurumidza kunzvimbo yekudzivirira. Mufaro wavo wakabatwa pedyo nemunhu mumwe, Arsene Wenger.
Kunge Cesc Fabregas, Bellerin pazera remakore 16 rakabviswa naArsene Wenger kuNorth London. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Upenyu hwaHector Bellerin huripo uye hunobva pahuno hwakatora kutendeuka kunofadza kubvira iye achisvika muEngland. Akange ari muukama hwekugara kwenguva refu nemuenzaniso wakanaka kwazvo Shree Patel.
Hector naSheree Patel
Runako bvudzi-bvudzi hunogara muLondon uye rine maIndia midzi. Akarongerwa zvekuda kweCalvin Klein nemitambo yeEllesse yemitambo uye ane vanopfuura 20k vateveri pa Instagram account iyo inonzi 'iamshree'.
Shree ndiye chete munhu akabatsira Hector kurwa kuponeswa paakazosvika kuLondon semukomana wemakore 16. Kutanga kutanga ushamwari pashure pemwedzi wekuuya kwake, Hector haana kumbonzwa akaneta zvachose uye ari oga muguta rino reLondon.
Zvose shiri dzinodanana dzinofanidza kugovana zvifananidzo zveavo vose vakada. Mifananidzo iri pasi apa yakagoverwa inogona kuitika mushure mekuita zvepabonde.
Hector na Shree, vose vakada.
Kupedza kunaka nguva nguva pamhenderekedzo yegungwa ndeyechokwadi, chimwe chinhu chakafanana nevadiwa vose vanogovana. Vafanisi havangashamisi kana vachizivisa mararamiro avo chero nguva pfupi.
Hector uye musikana, kushandisa kunaka nguva panguva yegungwa
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -A CoD Lover
Sezvo mukomana wemakore anonzi 16 achienda kune imwe nyika, Bellerín akawana hupenyu muEngland hunopikisa panguva dzakanakisisa. Akanga achida rubatsiro kuti atarame nemutauro wemutauro uye hutano hwekudzidzira hurumende yeArsenal academy.
Upenyu hwake hwaive hwakanyanyisa uye hapana zvinhu zvakawanda zvavanogona kuita munguva yake yega kuti avadzidzise kubva mukurumbira wake. Asingadi kupedza nguva nemusikana wake, Hector anoshandisa nguva yake yose kutamba Call of Duty pane PlayStation 4.
Hector- Afa-akaoma CoD fan
Zvakanaka, apo haasi kuputira kurudyi kumaEmirates, ari kukurumidza kuisa mabhodhi e PlayStation console yake. Pasi iri inobvunzurudzwa pane imwe Call of Duty Event.
Vakanga vari vake veU18s teammate iyo yakatanga kumuudza ku Call of Duty, uye makore mashanu pasi muganhu iye akabatanidza pamusana wepamuviri wepikicha yepikicha yemavhidhiyo. Bellerín inotaura kuti mumakore maviri ekutanga mushure mokunge atanga kutamba mutambo, aizotamba zuva rose mushure mokunge adzidzira.
Mubvunzurudzo pamwe zuva, Bellerín vakati zvinotevera. "Ndiro kusunungurwa kunonetsa kwandiri. Handina kuwana nguva yakawanda iyo kuti ndiite, saka kana ini ndiine vakaroorana neni, ini ndinowanzoti ndiwane CoD. "
Asi kunze kwekutamba Cod uye kupedza nguva neine musikana wake, Hector anoda kutarisa TV movie series ne mbwa yake iyo kazhinji inowedzera kunyatsoteerera mafirimu ose.
Hector uye imbwa yake inoratidza kunyatsoteerera kumhepo
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ari kukurumidza kupfuura Theo Walcott
Kubvira paakasvika pachikwata zvakare mu2006, Theo Walcott ave ari mutambi wekutsvaga muNorth London. Pakutanga kwegore re 2014-15, akavhuna Theo Walcott's 40-mamita Arsenal yakanyorwa zvinyorwa ne1 / 100th yechipiri.
Theo Walcott's record at 40 mamita akanga ari 4.78 seconds asi muSpanish akashandura kuti ane 4.77 nguva zvakare mu 2015. Zvisinei, nhepfenyuro ikozvino inoratidza kuti Bellerín akaveura ndeye nguva iyoyo kusvika kune 4.42 inoshamisa.
Zvechokwadi, mutsigiri weArsenal akakurumidza kuti angave akakwanisa kubuda "Triple-Triple" mupfuri wegoridhe Usain Bolt, uyo akavhara mumasekondi 4.64 kuti avhare kutanga 40-mamita paakagadza nyika yose ye 100-mita sprint.
NeInternet ichicherechedza, zvose Bellerín naBolt vakatoita kuseka kuburikidza nekupikisana kuburikidza Twitter. Pasina mubvunzo, Hector anoonekwa semumwe wevashandi vanonyanya kukurumidza munyika.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kutongwa Zvakashata
Munguva yechando ye2013, Arsène Wenger vakatumira huru-yekare ye18-yekare yemakore pachikwereti kuChampionship kurutivi rweWatford. Munguva iyoyo muSpanish akangoita zvisikwa zve 8 uye vateveri vazhinji veArsenal vakanga vasingagoni kunzwisisa chikonzero nei. Sezvo zvaiva pachena kuti wechidiki aisazova kuwana maminitsi aidiwa, Wenger akayeuka naye mushure memwedzi miviri chete.
Hector akambotongwa zvisina kururama neWatford
Makore mashomanana gare gare, Watford mutungamiri Troy Deeney akatipa kunzwisisa kuti nei chikoro cheLa Masia chakamboita mitambo mishomanana kuVicarage Road. Akaratidza kuti maneja panguva iyoyo, Giuseppe Sannino, akawana kuti weSpain ainge asina simba mukati mechikwata uye asingadziviriri akakodzera kutamba kurutivi rwake.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kutendeuka
Kubhururuka kwake uye kubwinya kwebhora kungadai kwakazvipa kure. Asi asati asvika nguva yake muLondon, Hector Bellerín akanga ari woni muBarcelona. Yaiva chete paakauya kuNorth London iyo yakashandurwa ikazara.
Zvanga zviri Wenger iye pachake uyo akaita kudanidzira kwekupedzisira pamusoro pekuti amudzorere kuti ave mushure-wakarurama kana kwete. Murume weFrance akapawo mubatsiri mudzidzisi Steven Bould kuti ave neyemapoka maviri pamwe chete nevechidiki kuti abatsire kushanduka kwake kuchinjwa kudzivirira. Bould aifanira kumudzidzisa nzira yekudzivirira kubva pakutanga.
Nhasi, Bellerín ikozvino inorema semumwe wevaduku vadziviriri vechidiki kwete kwete chete Premier League asi nyika yebhola.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -An Undergraduate
Muna 2016, Hector akanyoresa paIndaneti yeYunivhesiti yePennsylvania, chikoro chechikoro chechiChi Philadelphia.
Bellerin iri kutevera diploma pakushambadzira, uye inotarisa hurukuro paIndaneti uye inopedzisa kuongororwa kwewebsite yechikoro.
Uyu wechidiki akazobvuma kuti akanga achiwana dzidzo yepamusoro-soro ichida zvikuru, asi yakanga iri iyo yedzidzo yaaifarira zvikuru.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Tattoo Facts
Hector Bellerin anozivikanwa nokuda kwekukurumidzira kwake kunomhanya pasi pemutsara asi akawanawo kukoshesa muviri wake unyanzvi.
IkuSpanish speedster ine sleeve yakazara ichidzika pasi kuruoko rwake rworudyi runosanganisira mufananidzo weMhandara Maria inotarisa urefu hwepamberi yake.
Hector akamboti: "Ndakanga ndine yekutanga, rosary, amai vangu vaigara vachishandise ivo, asi zviri pachena kuti ini ndakanga ndisingagoni kutamba navo nokuti hamugoni kupfeka chero ruvara. "Saka ndakasarudza kuitora. Ndinofunga kuti ndakanga ndiri pakati pe15 kana 16 pandakanga ndazviita, uye ndiyo yaiva yangu yekutanga.
Hector anewo tambo yejiva uye chiratidzo chemhuri. The giant 'Mhuri' inomiririra mukoma wake, mbuya, hanzvadzi, amai vangu nababa uye mbuya uye vose veimba yeBellerin. Kuna Hector, zvinhu zvose ndezvemhuri yangu.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Héctor Bellerín Moruno anobva mumutauro weCatalan wepakati pemhuri. Vabereki vake, vanozivikanwa seMaty Moruno ndivo vaCatalans. Vakapa mwanakomana wavo kuCc Barcelona muchecheche we6. Bhora rekutsvaga kwekutsvaga kubva panguva yakabhadhara
Bellerin akambotenga imba itsva muLondon, uko vabereki vake vanotarisirwa kuti vagare. Vakanga vagara muLondon pedyo neHector. Munguva pfupi yapfuura, Akatenga imwe imba muBarcelona. Izvi zvakasvika pakati pekufungidzira pamusoro peArsenal kubva.
Hector Bellerin Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Zodiac Traits
Hector Bellerin inotsigirwa Pisces uye ine zvichemo zvinotevera kumunhu hwake;
Hector Bellerin's Strengths: Ane tsitsi, unyanzvi, ane njere, munyoro, akachenjera, mumhanzi. Kuneta KweHector Bellerin: Kutya, kunyanya kuvimba, kusuruvara, chido chokupukunyuka chaicho, kunogona kuva akaurayiwa kana kufirwa. Chii Hector Bellerin anoda: Kuve woga, kurara, mimhanzi, rudo, mavara-maonero, kushambira uye zvidzidzo zvomudzimu. Chii Hector Bellerin asingadi: Ziva-izvo-zvose, zvichitsoropodzwa, zvakapfuura zvekudzoka kune hunyengeri uye utsinye hwemarudzi ose.
Hector Bellerin wechiri mhuka yemhuka: Akati mhuka yake yaaida ndiyo tiger nokuti inofarira iyo "Nzara". Nokureva, izvi zvinoreva kuti weSpain ane chido chakakosha chekubudirira.
Tinovonga nekuverenga Hector Bellerin's Childhood Story pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!
Jack Wilshere Utano Nhau Plus Untold Biography Facts